Miaramila iray maty tao anaty fifandonana mahery vaika : efa lavo tamin’ny tany, mbola norarafan’ny dahalo tifitra | NewsMada
Maty voatifitry ny dahalo nandritra ny fanarahan-dia omby very ny miaramila kilasy voalo­hany, i Arison Nandraina Christophe, avy ao amin’ny 2BIA Tsiroanomandidy, afakomaly tolakandro. Latsaka tao anaty vela-pandriky ny dahalo izy…
“Ho an’ny Tanindra­zana”! Lavo am-perinasa noho ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ity miaramila avy ao amin’ny 2BIA Tsiroanoman­didy ity. Lavo nandritra ny fifandonana raha nanara-dia ahafahana mamerina ny om­bin’ny mponina nangalarin’ny dahalo izy, niaraka tamin’ny fokonolona. Araka ny fampitam-baovao voaray, nitran­gana asan-dahalo nahery vaika tao Miandrarivo, kaominina ambanivohitr’i Belobaka, distrikan’i Tsiroanomandidy, afa­komaly tolakandro.
Raha vao nahare izany ireo miaramila mpampandry tany amin’iny faritra iny, nanao ny fanarahan-dia niaraka amin’ireo fo­konolona ao an-tanàna. Nifa­nehatra ireo dahalo sy ireo mpanara-dia ary tafalatsaka tao anaty vela-pandriky ny dahalo ny miaramila kilasy voalohany, i Arison Nandraina Christophe. Voalaza fa efa nianjera tamin’ny tany izy no mbola norarafan’ireo dahalo tifitra variraraka ihany. Na teo aza anefa izany, afaka namaly tifitra ireo dahalo ihany ireo miaramila mpanara-dia, saingy tafaporitsaka ireo malaso.
Natao veloma ara-miaramila teny amin’ny Capsat…
Efa nampiakarina aty an-dRenivohitra ny fatin’ity miaramila lavon’ny malaso ity. Ho fanaovam-beloma sy ho fa­nomezam-boninahitra farany azy, nasondrotra ho amin’ny laharam-boninahitra kaporaly izy ary notolorana ny mari-boninahitra “Chevalier de l’ordre nationale”. Teny amin’ ny Capsat Fiadanana, toerana niasany, no nanaovana ny la­nonana ka nitarika izany teny an-toerana ny lehiben’ny Eta­mazaoron’ny Tafika mala­gasy, ny Jly Rabenaivoarivelo Jean Claude. Maneho ny fiaraha-miory ary mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Na eo aza izao fahafatesana miaramila izao, mi­tohy hatrany ny asa fampandrian-tany ataon’ny miaramila any amin’iny faritra Bongo­lava iny.